Ejipta: Bilaogera voatafika ao an-tranony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2019 8:06 GMT
Tamin'ny mitataovovona androany, raha tao anatin'ny asany ireo bilaogera Ejipsiana, na nijery aterineto, dia nisy hafatra Twitter tonga tamin'ireo izay manaraka ilay bilaogera malaza, Wael Abbas, izay mivaky toy izao:
Notafihan'ny polisy iray sy ny rahalahiny izaho sy ny reniko, niditra an-keriny tao an-tranonay izy ireo ary nidaroka ahy. Misy maratra ny lohako ary tapaka koa ny nifiko iray. Tonga ato an-tranoko ny kolikolin’ ny polisy!
Narahan'i Abbas tamin'ny sioka vaovao ny hafatrany, milaza fa niezaka niantso ny polisy mba hitady vonjy izy, saingy tsy nisy niseho izy ireo. Nitsahatra tsy namaly ny findainy ity bilaogera Ejipsiana manana mpanjohy miisa 1.875 ao amin'ny Twitter ity, raha niezaka niantso azy ireo namany, bilaogera sy mpikatroka marobe. Nisy mihitsy aza lahatsoratra bilaogy sasany mitantara ny fanafihana niseho tamin'ny laharana findain'i abbas Abbas.
Tsara ny manamarika fa mibilaogy ny heloka bevava fampijaliana ataon'ny polisy Ejiptiana i Abbas. Ary namoaka sarimihetsika maro mampiseho ny fampijaliana ao amin'ny tobin'ny polisy ny bilaoginy Al-Wa3i Al-Masri (Misr Digital). Araka ny voalazan'i Abbas, norahonana imbetsaka izy fa hosamborina na hodarohana.
Namaly antso iray avy tamin'ny iray tamin'ireo bilaogera ihany i Abbas nony farany, ary nilaza fa vao tonga ao amin'ny paositry ny polisy izy nitatitra ilay fanafihana. Nolazainy fa tsy maninona ny reniny, fa ny lohan'i Abbas no naratra ary tapaka ny nifiny iray! Niparitaka tamin'ny tontolon'ny bilaogy Ejipsiana, sy tao amin'ny Twitter, Jaiku ary Facebook ny vaovao nanafihana azy.
Iray amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy ilay polisy nidaroka azy, ary voalaza fa manana olana amin'ny fianakaviana, ka nampiasa ny fahefany amin'ny maha mpiasam-panjakana izy mba hiherisetra amin'i Abbas sy ny reniny efa antitra.